Xarumaha qaxotiga iyo cawintoda | JumaMap
Arin cusub oo ku saabsan degenanshaha iyo sharci dalbadaha
20ki disheembar waxa hir galay shariga cusub ee n. 173 Kasoo hirgaliyay shuruc cusub oo ku saabsan QAXOOTIGA Wax cusub DEGENANSHAHA OO LAGU SAMEYO qodobka.
Isbadal cusub ooku sabsan sijoornooyinka lo badali karo
20ki disheembar 2020 waxa hirgalay sharciga n. 173 kaso so kordhiyay aqbaraad cusub ooku saabsan QAXOOTIGA WAxcusub Magacyada sijoornooyinka loo badali karo sabab shaqo Qodobka
Dhaman sijoornooyinka dhacaayo inta u dhaxeyso 31 Janaayo 2021 Ilaa30 Abriil 2021 Waxeey shaqeenayana ilaa 30 Abriil 2021″ (Sharciga qodobkisa n. 2/2021) 327 Visite totali, 1 visite
Waa Maxau Dib ula midow ama keenida qoyksu? Dib u midowga qoyska ee ka faa’iidaystayaasha ilaalinta caalamiga ah 363 Visite totali, 1 visite odierne